ILibreOffice Calc: Ungayakha Kanjani Ishadi Lokuhlakaza | Kusuka kuLinux
Kokuthunyelwe kwangaphambilini ngikufundisile ngenisa ifayela lokushintshana idatha ngefomethi yombhalo ocacile. Namuhla ngizomela uchungechunge lwemininingwane ehlobene emithathu kusakhiwo esifanayo sokusabalalisa.
Into yokuqala okuzofanele sicacise ngayo, ukuze sisheshe sisebenzise lolu hlelo, ukwandiswa kwedatha esidlala ngayo. Kuyiqiniso ukuthi singalukhetha lolu chungechunge ngemidwebo, kepha uma unamaseli ayi-1000 kukholamu ngayinye, njengoba kunjalo kimi, ugcina ngokubhala kuqala.
Sizobona kamuva ukuthi singakwazi ukufaka idatha ngokushesha okukhulu ngokukhetha amakholomu okukhulunywa ngawo ngaphambi kokuqalisa ithuluzi lokufaka igrafu, kodwa ngenxa yesifundo sizokweqa le ngxenye.
1 1. Faka idatha
2 2. «Imidwebo» ithuluzi
3 3. Idatha Ibanga
4 4. Uchungechunge lweDatha
5 5. Izici zezithombe
6 6. Ukuphinda uthinte
1. Faka idatha
Lapha ungabona ukuthi ngilungiselele kanjani amakholomu ngenhloko yawo. Ngiphinde ngahlukanisa ishidi ngokuvundlile ukubona idatha ngaso sonke isikhathi (kwesobunxele) ngenkathi isigaba engizofaka kuso igrafu naso sitholakala (kwesokudla).
Inhloso yami ukudala igrafu yohlobo lwe-XY lapho ngizosebenzisa khona ama-quadrants ama-3:
Ku (X> 0, Y> 0) ngizohlela ikholomu Y kuqhathaniswa no-X.
Ku (X <0, Y> 0) ngizomela u-Y kuqhathaniswa no-X-1.
Ku (X> 0, Y <0) ngizomela u-Y-1 uma kuqhathaniswa no-X.
2. «Imidwebo» ithuluzi
Ukutholakala kubha yamathuluzi noma kumenyu ethi 'Faka', kusiza ukwenziwa kwamakholomu, amabha, imikhakha, imigqa, ukuhlakazeka, njll.
Endabeni yami, ngizokwakha isiza sokusabalalisa i-XY ngemigqa ebushelelezi, ngokunikezwa inani elikhulu lamaphoyinti akhona kusakhiwo sami.
3. Idatha Ibanga
Uma sichofoza ku-'landelayo ', iwizard isivumela ukuthi sikhethe "ibanga ledatha" esizosebenza ngalo. Njengoba ngishilo ekuqaleni, singakhetha kuqala izifunda zedatha yethu esifuna ukuyihlela. Le banga ledatha lingaqukatha izigaba eziningi zeshidi lokusebenzela elifanayo. Ukuze kube lula sizokweqa lesi sinyathelo (akubalulekile ukudala igrafu).
4. Uchungechunge lweDatha
Igrafu yethu izomela ngomugqa ngamunye ochungechungeni lwedatha oluchazwe kulesi sinyathelo.
Endabeni yami, ngibabize ngo-a, b no-c, ngokulandela i-oda lama-quadrants engishilo ngenhla.
Ukukhetha ububanzi obufunwayo bamanani we-X noma we-Y, singachofoza ibhokisi elingakwesokudla, elizonciphisa ibhokisi lengxoxo futhi lisivumele ukuthi sikhethe amabhokisi ngesandla.
Ukuze singabi naphakade ngokuncipha kwamaseli, sizokucacisa ngokwenza ngokulandela igama lesibizo:
Endabeni yefayela lami le-Calc (.ods), idatha iseshidini elibizwa nge- «UsemosLinux», amanani we-X no-Y angamaseli 3 kuye ku-1002 kukholamu K no-J ngokulandelana.
5. Izici zezithombe
Ekugcineni, kulesi sinyathelo sokugcina singalungisa i-aesthetics yomdwebo. Njengakho konke okwenziwe kuze kube manje, kungashintshwa ngokuhamba kwesikhathi.
6. Ukuphinda uthinte
Lapha sinegrafu yethu.
Yize iLibreoffice ithuthuke kakhulu uma iqhathaniswa ne-OpenOffice eyandulelayo, ukwelashwa kwemidwebo kuseyinto engathuthukiswa (futhi lokho sekuvele kungcono kakhulu kunalokho ebikunakho). Ngokunaka ukungazi kwami ​​okuphelele, ngizokusho kusibonisi seCalc: ulayini oluhlaza okwesibhakabhaka ufiphele ngandlela thile, kepha uxazululwa masinyane ngokushesha nje lapho silungisa usayizi wegrafu:
Igrafu kufanele ibe enembile kakhulu, ngakho-ke ngizoshintsha ifomethi yezimbazo. Ukwenza noma yikuphi ukulungiswa, mane uchofoze entweni esifuna ukuyiguqula, kungaba yigrafu yonke, uchungechunge lwedatha, izimbazo noma inganekwane.
Ekugcineni, ngithumela igrafu ukuyigcina ngaphandle kwespredishithi futhi ngikwazi ukuyisebenzisa kweminye imibhalo. Lapha kubalulekile ukuthi ulungise usayizi nokulungiswa kwesithombe kahle, kepha kulokhu kufundiswa sekuvele kukhona.
Kulezi zinsuku kufanele ngilwe namaspredishithi amakhulu we-Office 2013. Njengomthandi omuhle weFree Software ngisebenzisa ithuba lokusebenza noCalc ngendlela engakaze yenzeke. ILibreoffice iyindlela enhle enkulu, noma ngabe kukhona okubi ngayo. Unganqikazi ukufunda ukusebenza nayo.
Ngemuva kokulayisha amafayela wami we-Office 2013 kuwo, ngimangele kakhulu, kude kakhulu ne-FUD ekhishwe kuyo. Kuyiqiniso ukuthi ezinye izici abasebenzisi be-Excel abaphambili abazijabulelayo zisemuva kakhulu, kepha ekusetshenzisweni okujwayelekile kwespredishithi esinayo eCalc enye indlela yamahhala, yamahhala futhi etholakala ngokuchofoza KONKE izinhlelo zethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » ILibreOffice Calc: Ungayakha Kanjani Ishadi Lokuhlakaza
Ama-macros angasetshenziswa unomphela (avela ku-OpenOffice). Inkinga ukuthi i-OpenOffice isebenza ne-BASIC yayo eyehlukile kwi-MS Visual Basic, ngakho-ke kukhona izinto ezihlukile phakathi kwazo.
Kufanele wazi ukuthi ngiyazithanda lezi zinhlobo zama-athikili kuma-Linux blogs. Kusizo kakhulu ukwedlula "amalangabi", ngaphandle kwalokho ukubhala kwakho kucacile futhi kufushane. Ukubingelela.
Sawubona futhi usuvele uzame inguqulo yeChina Clone yeM M Office Office eLinux (okungenani ku-Ubuntu) ilungele abasebenzisi behhovisi abaphambili noma ingabe kungenye nje yezinhlelo zehhovisi leLinux ???
Angikaze ngisebenze neLibreOffice isikhathi eside, kepha lapho ngisebenza, ngayeka ukuyisebenzisa, ngivuna i-Excel, ngenxa yenkinga yama-macros womuntu siqu ... ngabe usuyilungisile le nkinga noma ingabe isasebenza?
Amathebula "angashumekwa" ekhasini ngezindlela eziningi, okwenza ngalinye lihluke. Ngabe uke wazama ukunamathisela lolo lwazi kufayela lombhalo bese ulingenisa njenge .csv noma okufanayo? Isifundo engisixhumanisa ekuqaleni kwalokhu okulandelayo silandela inqubo efanayo naleyo engiyenzile ukuzitholela umkhombandlela welabhulali eminyakeni embalwa eyedlule 😉
Uma kungakusebenzeli, ngithole nge-imeyili futhi sizobona udaba lwakho 😉
Kulungile ^. ^ Siyabonga ngokufundisa.
Njengoba ubonakala usebenza nezinkulungwane zamakholamu njengami, ngifuna ukuthatha leli thuba ukukubuza.
Njengamanje ngisebenzisa i-MS, ngoba angitholakalanga isisombululo ku-Calc.
Emsebenzini wami ngikopisha amatafula emakhasini wamasiko, engiwavula ku-Explorer, bese ngiwanamathisela ku-MS Office, i-Excel ibona ukuthi amatafula akuphi bese iwashiya ngendlela efanayo neyokuqala.
Lapho ngizamile ukukwenza kusuka ku-Chrome kuye kuCalc, ayikopishi i-oda, okungukuthi, livela esitokisini esisodwa. ngenkathi ngifuna i-oda langempela ngaphandle kokufomatha.
Njengoba kungumsebenzi ophindaphindiwe onamatafula amaningi, angikwazi ukuhlela iseli ngeseli, ngabe uyasazi isisombululo salokhu?
Akusona isidingo sokufunda, kususa umsebenzi wezinyanga eziningi phansi endlini yangasese. Khumbula lokhu okulandelayo, kuzo zonke izinkampani engisebenze kuzo, i-MS Excel isetshenzisiwe, ezinhlotsheni ezahlukahlukene, nomsebenzi wami emasontweni okuqala, bekuhlala njalo ukudala ama-macro wami ukuze ngizisindise umsebenzi omkhulu ngangokunokwenzeka esikhathini esizayo .
Anginqabi ukushintsha ispredishithi, ngithanda iLibreOffice Calc (ngaphezu kwe-Openoffice), kungukuthi "angifisi ukuphinde ngisebenzele into esengivele ngiyenzile" ... Ukube ukuhambisana bekungokuphelele, bengizothathwa i-Excel for kalula.
I-Visual Basic wulimi lobunikazi, ukuze ukuhambisana okugcwele kungafinyeleli kumkhiqizo we-GPL.
Ngaphambi kokuzama konke engikubambe ngebhendi ... namuhla ngikhululekile ngokukhetha kwami ​​futhi angijwayele ukuzinwaya ukuzama, ngincamela ukufunda ukusebenzisa enginakho.
Vele, uma ngithola ukulingana ngeke nginqikaze ukukutshela ukuthi "unjani". Ngolunye usuku bahlele enye indlela eya kuGoogle Docs nge Java ngo-24h ... xD
I-Brave shit MovieMaker ... umbono wawungemubi, futhi uma usebenza, kuhle ... inkinga ukuthi ... "uma kusebenza".
Ubusisiwe uma usebenza nezinhlelo zabo, ulahlekile uma ungasebenzi. Okuhlukile yi-MovieMaker, ngaso sonke isikhathi. i-xD
UPipo Unix kusho
Ngicabanga ukuthi inkinga ayikho ku-calc uma ingekho ku-chrome zama ukuzama okufanayo kepha kusuka ku-firefox!
Phendula ku-Pipo Unix
I-Excel macros kanye nama-calc macros abonakala enolimi oluhlukile, yize kubukeka njengehlaya, kufanele uzame ukudala imisebenzi ye-macro kusuka ku-calc efanayo futhi ungangenisi ama-excel macros ngaleyo ndlela uzokwazi ukuthi ayenzeka kunoma yiluphi uhlelo / suite yehhovisi ezishintshayo.
Lapho ubala ukuhlehla komugqa kusuka kusakhiwo sokuhlakaza, kwesinye isikhathi kufanele uphoqe umugqa ukuthi udlule kumsuka, kungenzeka lokho? Ngiyakhumbula ukuthi kuMSOffice bekungenzeka kepha angikwazi ukuthola inketho eLibreoffice.
Kukude nokuzenzisa kwami, kepha uma ngikwazi ngiyoqhubeka ngikubheke. 😉
UKenny silva kusho
Siyabonga ngokuthunyelwe. Okusangishiya ngidumele kakhulu ku-Open nakuLibreOffice yikhwalithi empofu yomugqa wabo wethrendi namathuluzi wokulinganisa ajika ngokuya ngamashadi okusabalalisa avezwe lapha. Lezi yizici ezisezingeni eliphakeme lapho ngicabanga ukuthi lezi zindawo zehhovisi zinendlela ende okufanele zihambe ngayo uma kuqhathaniswa neMicrosoft Excel. Ngiyabona ukuthi bagxile ezinhlosweni zabo ekuthuthukisweni kwesikhombimsebenzisi esincane, umsebenzi owodwa noma omunye, ukuthuthukiswa kwezinye iziphazamiso, engicabanga ukuthi kuhle kakhulu. Kepha bazishaye indiva kakhulu izici ezibaluleke kakhulu ezithuthukisiwe okuyizona ezibeka ithoni. Amathuluzi we-Advanced Solver, Amathebula we-Pivot, imigqa yeTrend yamashadi wokusabalalisa, Amafomethi anemibandela asebenzisa imigoqo, izimpawu nezinye phakathi kwezinye izihloko ezithuthukile. Engikuqaphelayo ukuthi bakhipha futhi bakhiphe izinhlobo ezinoshintsho oluncane kepha ekujuleni into efanayo. Awuboni ushizi othosi njengoba besho ezweni lami. Ngithanda isoftware yamahhala kepha ngenxa yomsebenzi wami njengonjiniyela nokuthi ngithathwa njengomsebenzisi othuthukile we-Excel, angizange ngenze ushintsho kulawa ma-office suites ngoba asele kakhulu ezintweni ezithuthukile.
Phendula uKenny Silva
i-darwin jaguar kusho
Phendula ku-darwin yaguana